Windows enweghị ike mezue usoro a: kedu ihe ị ga -eme? | Nzukọ mkpanaka
Windows enweghị ike mezue usoro a: kedu ihe ị ga -eme?
Daniel Terrasa | | Sistemụ arụmọrụ, Windows
"Windows enweghị ike mezue usoro a." Nke a bụ a njehie ndị ọrụ maara nke ọma mgbe ha na -achọ ịhazi kaadị SD, draịva USB ma ọ bụ draịvụ ike mpụga. Ọ bụrụ na ọ bụ gị, post a ga -enyere gị aka. N'ime ya anyị ga -enyocha ihe kpatara njehie ahụ na ụzọ isi dozie ya nke anyị nwere.
Njehie a bụ nnukwu ihe mgbochi nhazi disk nke mbughari, ihe ọ bụla ọ bụ: draịvụ ike mpụga, draịvụ ike, SSD, draịvụ USB, kaadị SD, pendrive ma ọ bụ CD / DVD. N'ọnọdụ ndị nkịtị, usoro a dịtụ kwụ ọtọ: dịka ọmụmaatụ, etinyere osisi ebe nchekwa USB na PC na ozi "Biko hazie diski ka ị nwee ike iji ya" pụtara. Otu ịpị ga -ezu iji mee ya. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ozi "Windows enweghị ike mezue usoro a" pụtara na mberede na ihuenyo? Nke ahụ na -agwa anyị nke ahụ ihe adịghị arụ ọrụ nke ọma.
1 Enwere ike ịkpata mmejọ ahụ
1.1 Ebe nchekwa USB mebiri emebi
1.2 A na -echedo draịva
1.3 Ụgbọala bu nje
1.4 Ụgbọala ghe oghe
2.1 Lelee njikọ USB
2.2 Melite Windows
2.3 Hazie eriri USB
3 Kedu otu esi echekwa data na ebe nchekwa anaghị enweta?
Enwere ike ịkpata mmejọ ahụ
Ihe nwere ike ibute njehie "Windows enweghị ike mezue usoro a".
Ihe kpatara njehie "Windows enweghị ike mezue usoro a" nwere ike ịdị iche iche. Ihe kpatara ya bụ ihe ndị a:
Ebe nchekwa USB mebiri emebi
Mperi ahụ na -esite na mmebi anụ ahụ na ngalaba ahụ, ma ọ bụ n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akụkụ ya ụfọdụ. Mmebi a nwere ike ime ka draịvụ ahụ ghara iru, yabụ Windows ga -ajụ anyị ka anyị hazie ya. O di nwute, nrụzi a anaghị adịkarị mfe ma ọ bụ dị ọnụ ala, mgbe ụfọdụ, agaghị ekwe omume ozugbo.
Ọ nwekwara ike ime na naanị ụfọdụ faịlụ dị na draịvụ mebiri emebi. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya, site na nbibi nke ukwuu ma ọ bụ njikọ na -ezighi ezi nke draịva USB. Mpaghara ọjọọ nwere ike imetụta nhazi usoro.
Ihe dị mkpa: USB flash draịva ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa bụ ngwaọrụ nchekwa na -eme ka ndụ anyị dị mfe. Ha na -enye anyị ohere ịchekwa nnukwu data. Na mgbakwunye, ha dị mfe ibufe na iji. N'otu oge ahụ, ha gbasara ngwaọrụ dị nnọọ nro ya mere ọ dị mkpa ịkpachara anya mgbe ị na -eji ma na -echekwa ha.
A na -echedo draịva
Mgbe nke a mere na nkeji, Ọ gaghị ekwe omume ịhazi ya, ebe Windows na -egbochi anyị. Ụzọ iji jide n'aka na ọ dị mkpa iji wepu nchedo a dị mfe: naanị nwaa idetuo ihe, ọ ga -enweta ozi na -akpaghị aka: “A na -echedo disk ahụ. Wepụ nchedo ederede ma ọ bụ jiri diski ọzọ ».
Iji kpochapụ nchedo a, enwere ọtụtụ usoro. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike iji regedit na ogpedit.msc ngwaọrụ site na sistemụ n'onwe ya. Agbanyeghị, ikpe ndị a adịkarịghị, yabụ na azịza ndị ọzọ bara uru ịnwale.
Ụgbọala bu nje
Nke a na -eme ọtụtụ ugboro karịa ka anyị chere. Ọ bụ ihe a na -ahụkarị maka draịvụ mbughari ịgbanwe aka wee kwụsị ịbanye na kọmputa dị iche iche. N'ezie, nke a bụ kpọmkwem ihe e mepụtara ngwaọrụ ndị a.
Nje USB butere site na nje: Ọ na -eme ọtụtụ oge na ọ bụ ihe anyị ga -echebe onwe anyị.
Mana o zuru oke na otu n'ime kọmpụta ndị a etinyere USB na -emetụta virus nke mere na ọ na -ebute draịva ahụ, na -ebute ụdị mmebi ya niile na n'ikpeazụ igbochi usoro nhazi.
Ụgbọala ghe oghe
Ọ dị ka enweghị echiche, mana ọ bụ otu n'ime ihe kpatara m jiri nweta ozi "Windows enweghị ike mezue nhazi". Ọ bụrụ na ọ nweghị otu nkebi na draịvụ ike, ọrụ a agaghị ekwe omume, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ịhụ na ekenyela ya akwụkwọ ozi mbanye. Mana ịhazi ya dabere na nkebi, ọ bụghị oghere ekewaghị. Yabụ n'ọnọdụ ndị a, Windows agaghị enwe ike mechaa nhazi ya.
Ngwọta ịhazi draịva USB ma nweta ọdịnaya ha
Ozugbo achọpụtara ihe na -ebute nsogbu ahụ, ọ bụ oge idozi ya. Onye ọ bụla ngwọta na anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu dabara na nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị ahụ e kwuru n'elu.
Ụfọdụ n'ime ha pụtara ihe, mana ọ dị mkpa; ndị ọzọ dịtụ nkọ karịa. Ihe dị mkpa bụ na ha niile nwere ike ịbara anyị ezigbo uru, dabere n'ihe bụ nsogbu. Ha bụ ndị a:
Lelee njikọ USB
Dị mfe dị ka nke ahụ. Tupu ụjọ atụwa anyị ma ọ bụ bido ịnwale ụzọ dị mgbagwoju anya, anyị ga -emerịrị ya wepu ihe kpatara ya na ihe kpatara ya. Yabụ otu n'ime ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ ijide n'aka na ọ nweghị nsogbu njikọ njikọta. Njikọ ndị dị n'ọdụ ụgbọ mmiri USB na -agwụ ike, nke na -emetụta ọrụ ha nke ọma.
Kedu otu anyị si eme ya? Naanị na -ewepụ draịvụ nchekwa ahụ n'ọdụ ụgbọ USB ejikọrọ wee nwaa itinye ya n'ọdụ ụgbọ mmiri dị iche. Ọ bara uru ọbụna ịnwa ijikọ na kọmpụta ọzọ.
Fọrọ nke nta dị ka nke dị n'elu. Ọtụtụ oge ndị ọkwọ ụgbọ ala USB na -ada ma ọ bụrụ na emeliteghị ha nke ọma na sistemụ arụmọrụ. N'okwu ahụ, ihe niile a na -edozi ya n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na anyị melite Windows.
Iji gaa n'ihu na mmelite a, naanị ihe ị ga -eme bụ pịnye "Mmelite" na menu mmalite na, na nsonaazụ pụtara, họrọ bọtịnụ "chọọ mmelite". Nke a ga -emepe ngalaba nke Mmelite Windows Nhazi. Ozugbo ị ruru ebe ahụ, pịa “Lelee maka mmelite” iji mezue usoro a.
* Ọ bụrụ otu a, nwaa ịchọta mmelite na -emegiderịta ma wepu ya.
Hazie eriri USB
Ugbua na nsụgharị mbụ ya, Windows etinyere ngwa ọrụ bara uru mgbe a na -ahazi draịvụ ike sistemụ. Na ihe Onye njikwa diski Anyị nwere ike ịhazi diski dị n'ime, mepụta nkebi, kenye akwụkwọ ozi, wdg. Mana ọ ga -enyekwara anyị aka ime otu ihe ahụ na mpaghara nchekwa mpụga ejikọrọ na akụrụngwa anyị.
Hazie USB aka site na iji njikwa diski
Iji rụọ ọrụ a wee kpochapụ ozi "Windows enweghị ike mezue usoro ahụ", soro usoro ndị a:
Mbụ anyị pịa bọtịnụ aka nri iji mepee "Malite NchNhr".
N'ebe ahụ ka anyị họrọ nhọrọ Njikwa Disk. Site na nke a, a na -egosi anyị ndepụta nke draịvụ ike na kọmputa anyị. N'ala ala, a na -anọchite anya ha na nkebi ha, aha na akwụkwọ ozi ha.
Anyị na -ahọrọ otu nke anyị chọrọ ime ihe wee pịa bọtịnụ aka nri ka ịhọrọ nhọrọ "Ụdị".
Mgbe ahụ windo ga -emepe na ọtụtụ nhọrọ. Ọ bụrụ na unit bụ n'ime anyị na -ahọrọ FAT32; ma ọ bụrụ na ọ bụ otu ihe mpụga ka anyị na -ahọrọ NFTS.
Wayzọ ọzọ iji jiri aka gị debe USB bụ site na ngwa ahụ Diskpart.
Hazie USB na aka gị site na iji ngwaọrụ diskpart
Iji hazie ihe site na iji ngwaọrụ Diskpart ọ dị mkpa iji PowerShell. Anyị na -akọwa ya n'usoro:
Dịka na usoro gara aga, ị ga -pịa bọtịnụ aka nri iji mepee menu nke Inicio. N'ebe ahụ ka anyị na -ahọrọ "Windows PowerShell (Onye nchịkwa)".
N'ime igbe, anyị na -ede ihe nye iwu "diskpart" ma pịa Tinye.
Ka diski ejikọrọ na kọmpụta anyị (ma nke ime ma nke mpụga) apụta na enyo, anyị wee tinye iwu ahụ Ndepụta.
Ka ọnụọgụgụ nkeji ndị a, ị ga -ede iwu a "Họrọ disk" sochiri ọnụ ọgụgụ e kenyere na nkeji nke anyị chọrọ ịhazi.
Iji hichapụ ihe niile anyị ga -eji iwu ahụ Dị ọcha.
Iji mee nkewa, anyị ga -ede "Mepụta nkebi nke mbụ" anyị ga -ejikwa ya họrọ ya "Họrọ nkebi 1".
N'ikpeazụ, ị ga -eji nkebi rụọ ọrụ "Nọ n'ọrụ" ma nye ya akwụkwọ ozi, dịka ọmụmaatụ M maka Movilfórum: "Nyefee akwụkwọ ozi = M".
Site n'ime nke a, anyị ga -enwe draịvụ USB anyị ma ọ bụ draịvụ draịvụ ebudatara ma dị njikere iji ya.
Kedu otu esi echekwa data na ebe nchekwa anaghị enweta?
MiniTool Power Data Recovery, ngwanrọ pụrụ iche na mgbake data
Ọ bara uru icheta na, mgbe anyị na -ahazi diski ike, a na -ehichapụ data niile dị na ya. Dị ka akpachara anya, tupu arụ ọrụ ọ bụla, ọ ga -adị mma ka ịmepụtaghachi data nke data dị mkpa. Mana mgbe ahụ ọ ga -apụta "ozi Windows enweghị ike mezue usoro a". Mgbe ahụ, Kedu otu esi echekwa data ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịnweta draịva?
Nanị ihe ga -eme bụ ịrịọ enyemaka nke a ngwanrọ mgbake data. Otu n'ime ihe kacha mma bụ Obere data data MiniTool, ahaziri maka ndị ọrụ Windows. Enwere ike ibudata ya na njikọ a: Ngwa Obere. Ka anyị hụ ka ọ si arụ ọrụ ozugbo etinyere na kọmpụta anyị:
Anyị na -ahọrọ draịva USB wee mee nhọrọ nke MiniTool Partition Wizard "Naghachi data".
Na-esote anyị pịa okpukpu abụọ na nkebi eriri USB a na-ekwu maka ịmalite ịgụ isiokwu. Usoro nyocha a na -enye anyị ohere ịhọrọ faịlụ a ga -enwetaghachi yana ịhọrọ ụzọ aga.
Usoro nwere ike were karịa ma ọ bụ obere, dabere na ọnụọgụ faịlụ dị na ya. A na -atụ aro nke ukwuu ime ụdị mgbake a ọbụlagodi na enwere ike ịnweta ebe nchekwa, dịka ịkpachara anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Windows enweghị ike mezue usoro a: kedu ihe ị ga -eme?